I-Alumina powder enhle yenziwa nge-sodium calcined alumina powder ephansi ngokugaya nangokucubungula okujulile.
Umklamo ohlongozwayo we-laund wenziwa ngokuya ngemithetho yezempilo nokuphepha esetshenziswa ezitshalweni zomthengisi maqondana nokuqina kwesakhiwo sensimbi, izakhiwo zezinto ezisetshenziswayo kanye nezidingo zensimbi. Isibonelo, isivinini sokugeleza kwensimbi, ukumelana nomhuzuko nezindawo ezishisayo zolwelwesi.
Njengamanje, isidingo semakethe se-high-grade aluminium alloy siyanda, futhi amakhasimende okugcina anezidingo eziphakeme neziphezulu ngekhwalithi. Ngokuvamile, lolu hlobo lwesidingo se-high-grade aluminium alloy luyathuthuka lubheke kuthrendi lwendonga encane, enamandla amakhulu, okulula ukuyicubungula. Lesi sidingo sokuhlanzeka kwe-aluminium ingxubevange yangaphambi kokuya ngokuya sifuna kakhulu.
Ukugeleza okuthile kwegesi engena ngaphakathi (i-nitrogen noma i-argon) noma igesi elixubekile (i-argon-chlorine noma i-nitrogen-chlorine body gas) ku-aluminium encibilikisiwe, ngokusebenzisa i-rotor ejikelezayo noma ipayipi legesi kwi-aluminium encibilikisiwe yaba amabhamuza amancane, futhi ngendlela efanayo ku-aluminium ewuketshezi. I-Hydrogen ku-aluminium encibilikisiwe ihlala isakazeka kumabhamuza egesi angenalutho, futhi njengoba amabhamuza egesi enyukela ebusweni be-aluminium encibilikisiwe, injongo yokususa i-hydrogen ne-slag iyatholakala.